Nobuhle, charm nesitayela elicwengiweyo - yezingxenye esemqoka okuphumelela zesifazane. Futhi lokho intombazane akusho dream ukubheka ebukekayo futhi epholile, ukuze sidonse amehlo abantu, sinqoba ebusheni bakhe nobungqabavu? Yiqiniso, ku kubukeka kanjani kuxhomeke kakhulu. Ikakhulukazi, indima enkulu kulokhu kudlalwa ezihlukahlukene izesekeli, okuyinto isikhafu "Coral Summer" kusukela "Oriflame". Elegant elikhanyayo akabashiyi abayithandayo sokunganaki ehlobo yemfashini.
Ngempumelelo, imfashini kanye njalo samaholide!
Akukhona nje ubucwebe ezibizayo ungakwazi ukuhlobisa isithombe sakho esisha nsuku zonke, kodwa futhi kerchiefs egqamile futhi scarves. Futhi akusiyo obalulekile kakhulu, lokhu-usuku lwesonto, lapho uya emsebenzini noma ngeSonto nabangane "ekukhanyeni." Into esemqoka ukuthi accessory ye kugcizelelwe suit nenhle futhi wanikeza Ngokuphambene umbukwane izingubo zakho.
Ngaso sonke isikhathi, uhambo nsuku zonke ehhovisi, okukhiphayo - ebhayisikobho noma emcimbini, nje ephelele isikhafu «Coral ehlobo», okuyinto libuyekeza ukuchaza njengethuba emangalisayo isifazane, Airy-accessory flying igama ngokulandelana abakhethiwe. Ubizwa aphindwaphindwe ngabanye konke okwenzayo, futhi ngeke ufane ikakhulukazi kahle ehlobo blouses, shirts, jackets kanye blouses wathungela kuhlangene ibhulukwe zakudala, jeans nemfashini noma isiketi.
Isikhafu "Coral Summer" delightfully ubheka amantombazane asemancane nabesifazane abadadlana. Futhi akunandaba, uyobhala blonde, onsundu ngokuphaphathekile noma abe Brunette - kuba njalo imfashini kanye umxhwele! Oh, ngempela anakekela Abaklami "Oriflame".
Material kanye Umbala
Made obucayi, ukukhanya futhi mncane polyester isikhafu «Coral ehlobo" kubanga inkohliso of motion bushelelezi. Akubalulekile ukuba yensimbi, ngakho kulungile kakhulu noma iyiphi uhambo - wakufaka esikhwameni noma zihlale epotimendeni, futhi konke kuhamba kahle, futhi uma kudingeka - ukubeka kunoma isiphi isambatho ehlobo!
ayevumela Indwangu, into marlevku efana, lapho ulunika ngisahlose ekhethekile futhi adambise. Into ekahle kakhulu nayehamba uhambo olude ibhizinisi noma eholidini. Uma ukhetha dress ilungelo, isikhafu elikhanyayo entanyeni Angekhe uthabise iso abanye, kodwa futhi akunike isimo samaholide nokwethembela charm yakhe.
Ngokulingene umkhiqizo eside futhi obanzi ngokwanele ezimthende senziwa shades obomvu nomhlophe. umugqa omhlophe Neat sise imiphetho, ukudala umbono Lihle komgwaqo.
Uma ecabanga indlela tie kahle isikhafu «Coral ehlobo", "Oriflame" ukunikeza ezinye iziphakamiso abaklami kanye stylists. Okokuqala, ububanzi elilungile ivumela isikhafu kubanda uyiphonse emahlombe akhe, ukumboza kusukela hlala kusihlwa noma ntambama umoya. Okwesibili, wena umane kufanele uyibophe ngendlela efanayo njengoba uthayi bendabuko.
Ungakwazi namanje ukugoqa isikhafu entanyeni kabili futhi tie ifindo elincane phakathi noma ohlangothini, noma ukhululeke uzizamele nokwakheka isikhafu, isibonelo, umnsalo enkulu.
Othanda zabuna ngokuqinisekile zama ukugoqa accessory umbukwane entanyeni futhi aphonse emikhawulweni emibili eside ukuba emahlombe emuva, noma ushiye komunye umkhawulo uhlanganyela phambi. Ngokuvamile, izinketho eziningi futhi wonke omuhle. Futhi, njengoba sasinothando izinto umbukwane imfashini, mhlawumbe kule sizini uzothola indlela yakho kuphela. Kunoma ikuphi, into esemqoka - ukucabangela, kanye ukuthi zingubo zini izambatho: ewumngcingo, isiketi ububanzi, ibhulukwe zakudala, izikhindi noma imfashini intsha jeans.
Isimo kuhlale nawe!
Labo abagada kakade wathenga elijabulisayo isikhafu «Coral ehlobo" wajabula kakhulu nokukhetha kwethu, kutuswa ukuba bonke abathandi imfashini izesekeli ukuthenga le nto encane stylish. Phela, kulula ukwakha isithombe onamileyo! Ngakho-ke yenza ikhabethe lakho acebile uphinde udale izithombe ezintsha nge isikhafu «Coral ehlobo». Nikeza iholide futhi bazuzise nabanye, kanye izesekeli kusukela "Oriflame".
Ipeni-komzila: Ukukhetha, izincazelo, izithombe
Tourniquet. Technique tourniquet egatsheni
Nokuhlanzwa okhanda amanye amathuba amagesi